(BBC)-Dal Yurub ah oo Baaritaan adag ku sameeyay qoxootiga ay soomaalidu kamid tahay. - NorSom News
(BBC)-Dal Yurub ah oo Baaritaan adag ku sameeyay qoxootiga ay soomaalidu kamid tahay.
Laanta socdaalka wadanka Switzerland ayaa sameeyey barnaamij lagu baadhayo macluumaadka taleefanada iyo kumbuutarada dadka magangalyo-doonka ah ee dalkaasi iska dhiibi sida lagu daabacay warbaahinka dawlada.
Barnaamijkan waxa la bilaabay sanadkii 2017 ilaa 2018 si loo xaqiijiyo jinsiyada qofka iyo macluumaadka la xariira xogta uu isku dhiibayo sida lagu cadeeyay macluumaadkan waxa lagu sheegay in baadhis lagu sameeyey ilaa 565 isugu jira taleefano iyo kumbuutaro.
Baadhitaankan waxa lagu sameeyey xarumaha ay ku jiraan dadka magangalyo doonka ah oo ay kamid yihiin xarumaha Chiasso, canton Ticino,iyo Vallorbe, canton Vaud.
Mashruucan ayaa ujeedadiisu ahayd in lagu yareeyo xaqiiqda in dad badan oo magan galyo doon ah aysan haysan dukumiintiyo ku filan iyo in 15% kiisaska xogtii la soo uruuriyay waxay muhiim u tahay sugida asalka iyo xaqiiqada macluumaadka safarka muhaajiriintu ay soo mareen
Dhamaan falanqeynta waxaa lagu sameeyay si ikhtiyaari ah, ayuu yiri Bach oo ah afhayeen u hadlay hay’adan samaysay baaritaanka, ma jirin wax ku xadgudbay shuruucda macluumaadka ama asturnaanta ayuu yiri.
Dadka arrinkan uu saamaynayo waxa kamid ah dadka Soomaalida oo kamid ah dadka inta badan qoxoontinimada isaga dhiiba wadamada Yurub,arinkan ayaa ah mid culays saaray dadka magangalyo doonka ah.
”Haa way jirtaa culays fuulay dadka isdhiibaya waayo 99% dadkan magangalyo doonka ah ma wataan baasabooro ama warqado cadaynaya jinsiyadooda ama meesha ay ka yimadeen,xisbiyada ka soo horjeeda Ajanabiga waxay leeyihiin waa talaabo fiican hadii la keenayo wax inaga caawinaya dadkan meesha ay ka soo jeedaan,arinkan hadii uu hir galo waxa kadhalan kara in qofka sharciga laga qaado iyo in wadanka laga saaro oo loo celiyo meeshii uu ka yimid”
sidaas waxa warbaahinta u sheegay Axmed Jaamac Fidhbool oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka caasimada Geneva.
Xildhibaan Axmed ayaa qaba in arinkan uu yahay mid aan ku fiicnayn dhanka xaquuqul iinsaanka kana hor imaanaya sharuucda dalka u yaala.
”Maya lama ogola in qofka xogtiisa gaarka ah loo dhaco sida taleefanadiisa isaga oo aan ogalayn,sharciga Switzerland ma ogola,waana arinka ay ku dacwoonayaan hay’adaha xaquuqul iinsaanka iyo xisbiyada ka soo horjeeda mucaaridka laakiin hay’ada socdaalku waxay ku dacwoonaysaa in baadhitaankani yahay tijaabo dadkani ay ogolaayeen in xogtooda la baadho oo taleefanada laga qaado” sidaas waxa BBC-da u sheegay Axmed Jaamac Fidhbool oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka caasimada Geneva.
Hay’adda Qaxoontiga Switzerland, dhinaca kale, waxay u sheegtay Keystone in baadhitaannada la sameeyay ay yihiin kuwo wax gal ah oo aan amaan ahayn, isla markaana aan caddayn iyo haddii ay mas’uuliyiintu u isticmaali doonaan xogta ujeeddooyin kale.
Seddex meelood labo meel magangalyo-doonka Switzerland ma awoodo inay ku cadeeyaan aqoonsigooda baasaboor ku filan, sidaas waxa leh hay’ada socdaalka Switzerland.
Previous articleLabadii oday ee ka hortagay weerarkii masaajidka oo maamuus loo sameeyay.
Next articleNorway: Dowlada oo rabta inay wax ka badasho nidaamka isdhexgalka ee soo galootiga.